संविधान दिवसमा बेहुली झै सिंगारिए स्मार्ट सेन्टर
काठमाण्डौ । तेश्रो संविधान दिवसको अवसरमा स्मार्ट टेलिकमले आफ्ना काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका स्मार्ट सेन्टरहरुलाई झकिझकाउ बनाइएको छ । ती सेन्टरहरु संविधान दिवस २०७५ का पोष्टरहरुद्वारा सुसज्जित गरिएको थियो । साथै सम्पूर्ण स्मार्ट सेन्टरहरुमा मैनवत्ती प्रज्वलन तथा राष्ट्रिय गान गाई संविधान दिवस मनाइएको कम्पनीले जनाएको छ...
स्मार्टको रु.९९ को सीमा खरीद गर्दा टकटाइम, एसएमएस र डेटाको बग्रेल्ती अफर
काठमाण्डौ । नेपालको तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी स्मार्टले सिमकार्डको खरिदमा थप रु. ४० प्रदान गरेको छ । स्मार्टको सिमकार्ड खरिदमा प्राप्त हुने विद्यमान सुविधाको साथ थप रकम प्राप्त गर्न सकिने छ । रु. ९९ मा सिम खरिद गर्ने ग्राहकले १० मिनेटको टकटाइम, १० एसएमएस, २०० एमबि डाटाको साथ रु. ५० मेन ब्यालेन्सको साथमा अतिरिक्त रु. ४० समेत गरी मेन...
स्मार्ट टेलिकमको नयाँ ब्राण्डिङ र अफर
काठमाडौं । स्मार्ट, टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीले हालै नयाँ ब्राण्डिङ्गका साथ प्रस्तुत भएको छ । यसले स्मार्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार व्यवसायमा आफूलाई विकसित गर्नेछ । नयाँ ब्राण्डिङ्गअन्तर्गत कम्पनीले आफ्नो लोगो, स्लोगन, ग्राफिक्स, तथा कम्युनिकेसनलाई परिवर्तन गरेको छ । यसअघि “स्मार्ट सेल”का रुपमा परिचित भएकोमा अब &ld...
गाउँबाट शहरमा स्मार्टको दमदार प्रवेश, हालसम्मकै तीव्र गतिको फोरजी सेवा !
काठमाण्डौ । निकै लामो समय ग्रामीण भेगमा दूरसंचार सेवा प्रदान गर्दै आएको स्मार्ट टेलिकमले शहरी क्षेत्रमा दमदार सेवासहित प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ । स्मार्टसेलको रुपमा समेत चिनिइने यो कम्पनीले हाल संचालनमा रहेका अग्रणी २ दूरसंचार प्रदाय कम्पनीहरुको फोरजीलाई समेत पछाडि पार्ने गरी तीव्र गतिको फोरजी सेवाको साथमा आइतबारदेखि(कात्तिक...